Iiprojekthi neeMeko |
UJinan Licheng Wanxiang Xintian weSikolo
ILLEBEST LCD Sliding Blackboard yaziswa kwilabhoratri yemichiza kunye neeselabhoratri zeJinan Licheng Wanxiang Xintian School. Njengophawu olwahlukileyo lwebhodi yethu yeLCD, ukungabinalo uthuli kuhambelana ngokupheleleyo nesicelo seelebhu ezingenathuli nokwenza igumbi licoceke kunangaphambili.
Umlawuli wesikolo uthetha kakhulu nge-ILBEST LCD Blackboard. Ukholelwa ukuba impilo yabafundisi-ntsapho kunye neyabafundi iqinisekisiwe ngokuphepha ukungcoliswa kothuli oluvela ezingubeni. Kulunge kakhulu ukucima umbhalo obhalwe ebhodini ngokucinezela iqhosha elinye. Abasayi kuphazanyiswa luthuli nokusula ibhodi.
IYunivesithi yaseJinan Changqing-eQhelekileyo yeSikolo samaBanga aPhakamileyo saseJunior
Eli ligumbi lokufundela iJinan Changqing University-Affiliated Junior High School. Utitshala wezibalo ubhala ebhodini e-LONBEST LCD. Iphaneli esebenzisana nethaflethi isembindini yokuthelekisa ibhodi emnyama. Uthuli-free kunye nomsebenzi omnye ukucima umsebenzi kwenza ukuba kube lula ukuphepha ungcoliseko uthuli. Ukujonga ngamehlo kwabafundi kuqinisekisiwe ngenxa yobume obuqaqambileyo bokubhalwa kwesandla kunye non-radiation. Abafundi ngasemva kwigumbi lokufundela banokubona umbhalo obhalwe ngokucacileyo.
Impendulo evela kutitshala: Ootitshala esikolweni babonisa ukuba ootitshala bahlala bekhohlela ngenxa yothuli olubangelwa ngelixa bebhala besisula. Kwaye abafundi bayaphazanyiswa luthuli ngokunjalo, ngakumbi abo bangaphambili, nto leyo ikhathaza ootitshala nabafundi kakhulu. Ibhodi ebhodini ye-LONBEST yenza ibhodi ecocekileyo kwaye ingenalo uthuli kootitshala nakubafundi. Ngapha koko, isentloko saso sonke isibetho sinokuboniswa njengale ye-calligraphy.
I-ILBB ye-LCD yebhodi eqhotyoshelweyo ithathe indawo yebhodi yesiqhelo yesiko kunye nebhodi emhlophe, ukubonelela ngendawo yokufundisa ecocekileyo nenempilo yePanama International School nokunceda ootitshala kunye nabafundi ukuba baphucule ubuchule babo bokufundisa.
Uthuli-free kunye nomsebenzi omnye ukucima umsebenzi kwenza ukuba kube lula ukuphepha ungcoliseko uthuli. Ukujonga ngamehlo kwabafundi kuqinisekisiwe ngenxa yobume obuqaqambileyo bokubhalwa kwesandla kunye non-radiation. Abafundi ngasemva kwigumbi lokufundela banokubona umbhalo obhalwe ngokucacileyo.
Le yiklasi yamaTshayina yeSikolo samaBanga aPhantsi saseTai'an Zhiyuan. Utitshala ubhale isishwankathelo setekisi kwibhodi ye-LONBEST LCD ebhodini ukuvumela abafundi ukuba bacengceleze ibali ngokwamacebo ebhodini. I-angle ebanzi ye-Ultra ebanzi yenza ukuba abafundi abasemva bawubone ngokucacileyo umbhalo obhalwe ngesandla. Ngaphezu koko, umbala oluhlaza unokutsala umdla wabafundi kwaye ukhusele nokuqaqamba kwamehlo.
Ingxelo evela kutitshala: Omnye wootitshala esikolweni ubonakalisa ukuba abazali banelisekile ngebhodi ye-LONBEST LCD. Abantwana banemincili ngelixa benazo iiklasi kwaye bayakuthanda ukukrwada ebhodini emnyama ngexesha lekhefu, njengoko oku kuyinto entsha kubo kwaye bonke bafuna ukuzama. Ngaphezulu kwayo yonke, isitshixo sokucima umsebenzi kunye nokuphucula ubuchule bokufundisa. Umsebenzi usombulula ubunzima bokususa ibhodi emnyama yabantwana abakumabanga aphantsi.
Igumbi lokubonisa iqabane lethu eThailand
Le yindawo yokubonisa iqabane lethu eThailand. Ibuyisela imeko yokwenyani yeofisi yeshishini. Ibhodi emnyama etyibilikayo yeLCD ingasetyenziselwa kumagumbi enkomfa anabantu abalishumi. Iofisi encinci enabantu abangama-4-5 banokukhetha ibhodi yokubhala ye-LCD (52 '' / 66 '' / 60 '').
Ibhodi yokubhala ye-LCD inokuxhonywa eludongeni okanye ifakwe kwisibiyeli eshukumayo. Abasebenzisi abasokuze boyike ukuphulukana nokuphawula izitshisi okanye iikethi, hayi ngaphezulu, njengoko banokubhala nangezikhonkwane zeminwe okanye naziphi na izinto ezilukhuni ezinobunzima obuphakathi. Akukho zixhobo ziphathekayo zifunekayo konke konke, ukonga imali.
Igumbi lethu lemiboniso eShenzhen
Ikomkhulu lenkampani yethu iseJinan, nathi siseke isebe eShenzhen, samkelekile ukusityelela.
Ibhodi yethu emnyama ye-LCD ithathe indawo yebhodi yebhodi, yalushenxisa ngokupheleleyo uthuli, kwaye ikhusela impilo yabafundisi-ntsapho kunye neyabafundi.